Louis van Gaal oo ka fakaraya Inuu Iska Casilo Shaqada Manchester United Dhamaadka Xilli Ciyaareedkan. – STAR FM SOMALIA
Louis van Gaal ayaa doonaya inuu isaga dhaqaaqo Manchester United xagaagan sannad ka hor inta uusan dhamaanin qandaraaskiisa, sida ay qortay jariirada Ingariiska ee Daily Mirror.
Van Gaal ayaa hal xilli ciyaareed uu qandaraaskiisa uga harsanaan doonaa ka dib marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan laakiin waxaa la fahamsan yahay inay ku sii korodhay cadaadiska shaqada waxaana laga yaabaa inuu isaga tago shaqada xilli hore.
Ilo ku sugan Holland ayaa sheegaya in qoyska tababaraha reer Holland ay ku soo kordheyso walaaca ay ka qabaan howsha ku culus 64 jirkaan ee Old Trafford.
Van Gaal ayaa isaga shaqsi ahaantiisa qirtay inuu iscasilaad ka doorbidayo halkii la ceyrin lahaa intii lagu guda jiray sideed kulan oo isku xigta oo aan laga badinin Manchester United sannadkii hore.
Waxaa uu ka cawday saameynta ay ku yeelatay qoyskiisa iyo asxaabtiisa wararkii xanta ahaa ee sheegayay in la ceyrinayo, waxaana la fahamsan yahay in dadka isaga ku dhow dhow ay ka cabsi qabaan inuu dhamaadka xilli ciyaareedkan go’aansan doono inay shaqada intaas kaga egtahay islamarkaana uu ciyaaraha ka fariisto 12 bilood ka hor waqtigii uu qorsheynayay.